अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन् – हामी प्यानलकाे पक्षमा छैनाै, रावलको उम्मेद्वारी व्यक्तिगत हो « Sansar News
अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन् – हामी प्यानलकाे पक्षमा छैनाै, रावलको उम्मेद्वारी व्यक्तिगत हो
८ मंसिर २०७८, बुधबार १६:२३
काठमाडौं । अहिले धेरैलाई जिज्ञासा लागेको छ, गुटै गुटको पार्टी बनेको एमालेलाई महाविधेशनले कस्तो अवस्थामा पुर्‍याउला ? के महाधिवेशनसँगै एमाले एक सिंगो पार्टी बन्ला ? तर, त्यस्तो देखिन्न । उम्मेदवारी घोषणा हुँदै गर्दा एमाले आफैंमा विभाजित देखिएको छ भने एमालेभित्रका गुटहरु पनि विभाजित बन्दै गएका छन् । महाविधेशनको प्रक्रियासँगै थप नयाँ गुट बन्ने देखिएको छ ।
नेता भीम रावलको उम्मेदवारीसँगै १० बुँदे सहमति गर्दै एमाले भित्रिएको तेस्रो धार संकटमा पुगेको देखिन्छ । रावलको उम्मेदवारीसँगै तेस्रो धार के हुने अन्यौंल छ । संसार न्यूजले रावलको उम्मेद्वारी तेस्रो धारमा देखिएको विभाजनबारे नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं । नेतृ शाक्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एमालेभित्र तपाईँहरुलाई तेस्रो धारको रुपमा बुझिन्छ । तपाईँहरुकै समूहमा रहनुभएका भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यो उम्मदेवारी समूहभित्रको सहमति हो वा उहाँको एकल हो ?
यो सहमतिमा भन्दा पनि उहाँको व्यक्तिगत इच्छा हो । नेतृत्वमा रहने कुरा, सबैको चाहना भइहाल्छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्नै पाइँदैन भनेर भन्न मिल्दैन । योग्यता पुगेको, मापदण्ड पुगेको सबै उठ्न पाउँछ । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । तथापी मलाई उहाँले हतारो गरेर उम्मेदवारी घोषणा नगरेको भए हुने थियो भन्ने लागेको छ । सबैसँग छलफल र सरसल्लाह गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो ।
हिजो हामीले प्यानलको अभ्यास गर्‍यौं । जसले एमाले साँच्चिकै एक हुन सकेन । हामी बिग्रियौं । गुट बलियो भयो तर, पार्टी बलियो भएन । मेरो प्रष्ट कुरा, अहिले एमाले गुटमुक्त हुनुपर्छ । एमाले एकढिक्का हुनुपर्छ । मुलुकको नेतृत्व हाँक्ने पार्टी यसरी खण्डित हुनुहुँदैन् । रावलले जसरी उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, यो सामूहिक वा पार्टीगत भएन ।
भनेपछि रावलको उम्मदेवारी तपाईँहरुको प्यानलगत उम्मेदवारी होइन ?
गुट बनाउने विषय त गलत होला, तर अभ्यास गुटकै छ । तपाईँहरुलाई छुट्टै गुट भनेर चिनिन्छ । अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयमा पनि कतिपय जिल्लामा निकै विवाद देखियो । तपाईँहरुको गुटको तर्फबाट प्रतिनिधि नै समावेश हुन सकेनन् । महाधिवेशन जाँदा तपाईँहरुको हैसियत निकै कमजोर भएको देखाउँछ । महाधिवेशन पछि तपाईँहरुको अवस्था के हुने, प्रश्न उठेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, म सीमित भएर बस्न चाहन्न । नेकपा (एमाले) भनेर आइसकेपछि म गुट बलियो होइन, एमाले बलियो बनाउन चाहन्छु । म मेरो समूह भएर सीमित भएर बस्न चाहन्न । जुन इमान्दार छ, जो लगनशील छ, जो पार्टी भनेर लागेको छ, जो जिम्मेवारी लिन योग्य छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने वा नदिने ? प्रश्न यहाँ हो । म यो विषयमा खुलस्त छु । म यो विषयमा कुनै गुट भनेर हेर्दिन ।
हजुरको भावनाप्रति सबैले सायद सम्मान र कदर नै गर्लान् । तर, एमालेभित्रको अभ्यास त्यस्तो छ र ?]
नभए के गर्ने ? तपाईँको राजनीतिक भविष्य छैन भन्यो भने फुटेको पार्टीमा जानुपर्यो । फुटेको पार्टीमा राजनीतिक भविष्य त झन् सुरक्षित हुँदै हुँदैन् । त्यसले मुलुक हाँक्न पनि सक्दैन् । ०५४ सालमा वामदेव कमरेडले पार्टी फुटाउँदा पनि मैंले विरोध गरेकै हो, अहिले माधव जीले पार्टी फुटाउँदा मैंले ठिक गर्नुभयो भन्ने कुरा हुन सक्दैन् । फुटले कसैको भलो हुँदैन् । नमिलेका कुरा छ भने पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर मिलाउने हो । एउटा परिवारमा त कति गाह्रो हुन्छ, मिलेर बस्न । पार्टीभित्र सजिलो हुने कुरा भएन ।
परिवारभित्र पनि त विद्रोह हुन्छ, पार्टीभित्र विद्रोह हुने कुरा स्वभाविक होला । तपाईँहरुको शैलीलाई आत्मसमर्पण भनेर अरुले टिप्पणी गर्छन् । त्यसलाई अस्वभाविक मान्न मिल्छ र ?
यो आत्मसमर्पण हुँदै होइन् । आफुँले दुःख गरेर बनाएको पार्टीमा फर्केर आउनुलाई आत्मसमर्पण भन्न मिल्दैन् ।
एमालेको इतिहासमा महिलाको हिसाबले केही निश्चित पात्र मात्रै अगाडि आएको देखिन्छ । तपाईँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, अब तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न गर्छन् । तपाईँको उम्मेदवारी केमा हुन्छ ? तपाईँ उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे तलतिर आउने कुरा हुन्न होला ?